ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေ မေ ၂၂ ကစပြီး အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်လာနိုင်တော့မယ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ
ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေ မေ ၂၂ ကစပြီး အထူးအစီအစ...
20 พ.ค. 2563 - 09:51 น.
ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေ မေ ၂၂ ကစပြီး အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်လာနိုင်တော့မယ်
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ မေ ၂၂ ရက်ကစပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးနဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေ သဘောတူညီချက်အရ အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်လာနိုင် တော့မယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီအထူးအစီအစဉ်အရ နယ်စပ်ကတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းပြန်လည်ဝင်ရောက်လိုသူတွေအနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မော်ချစ်ကားဂိတ်ကနေ မဲဆောက်မြို့ကိုဘတ်စ်ကားတွေနဲ့ သွားခွင့် ကို ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးက မေ ၁၉ ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုဌာန (CCSA) ကထုတ်ပြန် ထားတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာချက်အရ မေ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ခရိုင် ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားလာတာကို ကန့်သတ်ထားခဲ့ပေမယ့် အခုနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းချက်အရ မြန်မာလုပ်သားတွေကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်သွားလာ ခွင့်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်အရ မေလ၂၂ရက်မှစတင်ကာ ည၁၀နာရီတွင်တစ်ကြိမ်၊ည၁၁နာရီတွင်တစ်ကြိမ် ယာဉ်တန်းနဲ့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်တန်းတစ်ခုတွင်ဘတ်စ်ကား ၅ စီးပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှမော်တော်ယာဉ် အစောင့်အရှောက်ဖြင့်လိုက်ပါပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မော်ချစ်ကားဂိတ်မှထွက်ခွာမည့်ဘတ်စ်ကားတစ်စီးလျှင် ခရီးသည် ၂၁ဦးသာစီးနင်းခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ဘတ်စ်ကားတစ်စီးဌားရမ်းခမှာ ၂၂၀၀၀ဘတ်ကျသင့်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် ၁၀၄၈ ဘတ်ကျသင့်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမားသံအရာရှိရုံးကို စာရင်းပေးသွင်းထားသူတွေထဲ ဘတ်စ်ကားစီးနင်းခငွေသွင်းပြီးစီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီးလိုက်ပါစီးနင်းခွင့်ရမယ့် ခရီးသည်အမည်စာရင်းကိုမေလ၂၀ရက်နေ့ ကစပြီး ကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့၊ မော်ချစ်ကားဂိတ်ကို လာရောက်စီးနင်းဖို့ အလှမ်းဝေးသည့်နေရာဒေသတွေမှာ နေထိုင်သူ တွေအနေနဲ့ နီးစပ်ရာဂိတ်တွေကတဆင့် ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်ပြန်မယ်ဆိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံတွင်း ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး ခရိုင်ဖြတ်ကျော်သွားလာခွင့်အတွက် မြန်မာသံရုံးအရာရှိရုံးကို တစ်ဦးချင်းအမည်စာရင်းဖြည့်သွင်းပေးပို့ ရမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထိုင်းက မြန်မာဘက် ပြန်လာတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ စလက်ခံ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာလို့ဆိုပြီး စက်ရုံအချို့ကို ပြန်စစ်ဆေးပေးဖို့ တိုင်ကြားထား
ကျန်းမာရေးနဲ့အညီလုပ်ဆောင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအတိုင်း မလိုက်နာလို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကို တိုင်ကြားထားတဲ့ စက်ရုံ ၁၀ ရုံခန့်ရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က မဆွေဆွေခိုင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အတတ်နိုင်ဆုံး ၃ပေစီခြားပေးဖို့ လက်ဆေးစရာနေရာတွေ စီစဉ် ပေးထားဖို့ ဆိုတဲ့အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်တွေကို စက်ရုံအလုပ်ရုံတိုင်းလိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေအဖြစ် ကျန်းမာရေး နဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာမှုရှိမရှိဆိုတာကိုလည်း ဧပြီ ၂၀ ရက်ကနေ ၃၀ ရက်နေ့အတွင်း သက်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ လိုက်စစ်ဆေးတာတွေကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
မေ ၁၅ ရက်နေ့မှာတော့ လူအင်အားများများနဲ့လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ စစ်ဆေးတာကို အားလုံးနီးပါးပြီးစီးသွားပြီလို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
' ' တိုင်ထားတဲ့ စက်ရုံတွေကို အခုချိန်ထိတော့ စစ်ဆေးပေးတာမျိုးမရှိဘူး။ကျန်းမာရေးဌာနက နောက်တစ် ခေါက်လောက် ညီညွတ်မှုမရှိတဲ့ စက်ရုံတွေကို ပြန်စစ်ဆေးပေးစေချင်တယ်။ ဆို ဖယ်ရီကားတွေပေါ် မှာလည်း လူတွေက အရင်အတိုင်းပဲ။ စစ်ဆေးတုံးခဏပဲ ပြီးတော့ အရင်အတိုင်း ပြန်လုပ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေ လည်းရှိတယ်''လို့ မဆွေဆွေခိုင်က ပြောပြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါလို့ သတ်မှတ်ထားရတဲ့ ကိုဗစ် -၁၉ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် တကမ္ဘာလုံးမှာ လူဦးရေ ၄သန်းကျော် ၅သန်းနီးပါးကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးသူ ၃သိန်း၂သောင်းကျော်ရှိလာပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မေ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကူးစက်ခံထားရသူ ၁၉၃ ဦးရှိလာပြီး ဒီထဲမှာသေဆုံးသူ ၆ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ အမ်ဖန် မုန်တိုင်းကြောင့် လူသန်းနဲ့ချီရွှေ့ပြောင်းပေး၊ မြန်မာမှာလည်း မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အလွန့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး အမ်ဖန် ကြောင့် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ တစ်နာရီ ၄၅ မိုင်နှုန်းနဲ့ တိုက်ခတ်နိုင်ပြီး လှိုင်းအမြင့်ပေ ၁၆ ပေခန့်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက မေ ၂၀ ရက်မနက်ပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အမ်ဖန် မုန်တိုင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပါရာဒစ်ပ်မြို့ (Paradip) (ဩရိဿ- Odisha) ရဲ့တောင်-အရှေ့တောင် ဘက် ရေမိုင် (၁၂၀)မိုင်ခန့်၊ ဒီဂါမြို့ (Digha)ရဲ့တောင်ဘက် ရေမိုင် (၁၉၅)မိုင်ခန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကမ်ပူပါရာမြို့(Khepupara)ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၂၈၀)မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ မောင်တောမြို့ (Maungdaw)ရဲ့ အနောက်- အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၃၀)မိုင်ခန့်နဲ့စစ်တွေမြို့(Sittwe) ရဲ့ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၄၅)မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေတယ် လို့ဆိုပါ တယ်။
မုန်တိုင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးတည်နေတာမျိုးမရှိသေးပေမယ့်လည်း မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် သက်ရောက်မှုဒဏ် ကိုခံစားရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ ရံဖန်ရံခါ မိုးသက် လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/ မြေပြင်လေဟာ တစ်နာရီကို(၄၅)မိုင်အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။
လှိုင်းအမြင့်မှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ အမြင့် (၁၀)ပေမှ (၁၆)ပေ ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မုန်တိုင်းအမ်ဖန်ကြောင့် အိန္ဒိယမှာတော့ အရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတလျောက်က သန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေကို မေ ၁၉ ရက်ကတည်းက ဘေးလွတ်ရာကို စတင်ရွှေ့ပြောင်းပေးနေရ ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မုန်တိုင်းကအိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး အနောက်ဘင်္ဂလား ပြည်နယ်နဲ့ ဩရိဿ ပြည်နယ်တွေကို တိုက်ခတ်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြ ပါတယ်။
ကူညီရေးအဖွဲ့ပေါင်း ၂၀ ကျော် ကိုတာဝန်ပေးထားပြီး နောက်ထပ်အဖွဲ့အများအပြားကိုလည်း အဆင်သင့်လုပ်ထားတယ်လို့ အစိုးရအရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို တားဆီးဖို့ လော့ခ်ဒေါင်းလုပ်ထားတဲ့ အချိန်မှာ အလုပ်မရှိတော့တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ မွေးရပ်မြေ ပြည်နယ်တွေဆီ ပြန်နေကြရာမှာ အဲဒီ အနောက် ဘင်္ဂလား ပြည်နယ်နဲ့ ဩရိဿပြည်နယ်တွေကို ပြန်လာကြတဲ့သူတွေကလည်း အများအပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားတွေ မေ ၂၂ ကစပြီး အထူးအစီအစဉ်နဲ့ ပြန်လာနိုင်တော့မယ် အပါအဝင်မနက်ခင်းသတင်းများ